စင်ကာပူမှ မြန်မာအိမ်ဖော်လေး မတင်ဝါဝါခိုင် ပိုစ့်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကွန်မာန့်များအား ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်း.. ~ ဒီမိုဝေယံ
စင်ကာပူမှ မြန်မာအိမ်ဖော်လေး မတင်ဝါဝါခိုင် ပိုစ့်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကွန်မာန့်များအား ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်း..
System Error ဖြစ်ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကွန်မာန့်များ ပြန်လည် ဖော်ပြအပ်ပါတယ်..
Anonymous စလုံး က ဗမာ သံရုံး ဒီကိတ်စ ဘာလုပ်ပေးမလဲ စောင့်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ သူနာပြု ဆရာမ ခိုင်ခိုင်စော ကို ကျေးဇူးတင် တယ်။
၁၆ နှစ် အသက်မပြည့်သေး သူကို နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့တာဝန်ရှိများမှာစပြီး စင်ကာပူမှာ အိမ်ဖော်လုပ်ခွင့်စေခိုင်းတဲ့ အေ့ဂျင့်ကိုပါ အရေးယူနိုင်အောင် ဆက်လက်ကြပါ . မခိုင်ခိုင်စော ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ် အေးဂျင့်ကိုပါ အရေးယူ ရမယ်၊ သူတို့ ပွဲခ ရဖို့ချည်းပဲ ကြည့်လို့ မရဘူး၊ အလုပ်ရှင် က ဘာလူမျိုးလဲ၊
အဖြစ်မှန်ကို တင်ပြရဲတဲ့ မခိုင်ခိုင်စောကို ဂုဏ်ပြုကြပါ။ အသက်မပြည့်သေးသူကို ပတ်စပို့လုပ်ပြီး ဘယ်ဌာနက လွှတ်လိုက်တာလဲ၊
ဘယ်အေးဂျင့်က အိမ်ဖော်အဖြစ် ရောင်းစားလိုက်သလဲ။
ဥပဒေအထက်က ဘယ်သူမှ မရှိစေရဆိုတဲ့
ဦးရွှေမန်းတို့၊ ပြည်ထဲရေးက ခေါင်းမာသူ ကိုကို။ စိမ်းလဲ့ကန်သာ ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု ပေါ်အောင် မဖော်နိုင်ပေမဲ့ ရာထူးတက်ပြီး လ၀က၀န်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ ရဲချုပ်ဟောင်း ခင်ရီတို့ ဘယ်လို အရေးယူကြမလဲ၊
ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖမ်းတဲ့နေရာမှာ လက်သွက်ပြီး ရက်စက်ခဲ့တဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ကိုခင်ရီ ပတ်စပို့ထုတ်ပေးတာဆိုတော့ လူကြီးမင်းရဲ့ ဌာနနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပြီ။
ဖြစ်နိုင်တာကတော့.မိုးသီတာဆိုတဲ့.ပွဲစားမဖြစ်မယ်.သူများလင်ကြီးကိုအမိဖမ်းထားတဲ့မိမ္မပဲ စီးတီးဟောအပေါ်ထပ်မှာတောင် ဟိတ်ဟန်နဲ့ဆိုင်ဖွင့်လိုက်သေးတယ်.
စင်္ကာပူမှာမြန်မာဆို ၁ သိန်းကျော်၇ှိတယ်ဆိုပြီး၊
အံသြောဖို.ကောင်းတယ်။ ယူအက်စ် မှာဆိုယင်
Poor girl.. Agree with Khaing Khaing Saw. Involve in this case and give ur supports pls..
ဆိုပီးကျန်တာတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲ.စင်ကာပူဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်ဦးလွင် ဘာလုပ်ပေးမလဲ ယဉ်ကျေးစွာ စောင့်ကြည့်ဦးမယ် ဖိလစ်ပိုင်အိမ်ဖော်မလေးတုန်းက
် စင်ကာပူနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အနေနဲ့လည်း
မိမိတို့ နိုင်ငံသားတွေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်
အလျှင်အမြန် Actionယူ လုပ်ဆောင်ဖို့လည်း အလေးအနက် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်..။
နနဲ့...စောင့်ကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျာ...။ အမျိုးကိုလည်းစောင့် ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဗျာ..။ သတင်းဌာနတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
နောက်ပြီး (၁) ဂျပန်ပါးရိုက်မှု (၂) တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်း (၃) ယခုစင်္ကာပူမှ အိမ်ဖေါ်လေး မတင်ဝါ၀ါခိုင် အမှုများကို မျက်ခြေမပြတ်တင်ပြပေးကြပါခင်ဗျာ..။ ကူညီနိုင်သောလူများလည်း ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ...။ တစ်ကိုယ်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့လူတွေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်လည်း တစ်မျိုးသားလုံးကို စောင့်ရှောက်ရာရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။ ဥပမာ အမေရိကန် တွေဆိုရင် ... သူတို့လူမျိုးဘယ်နေရာမှာမဆို...မရရအောင်ကယ်ထုတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ..။ အမေရိကန်ကစစ်သားတွေဆိုရင်...သူတို့မိန့်ခွန်းထဲမှာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက်..မင်းကို ငါတို့လာကယ်မယ်တဲ့...ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တဲ့စည်းရုံးရေးစကားလေးလဲဗျာ..။ ခွန်အားလည်း ဖြစ်စေပါတယ်..။ နောက်ပြီးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း ဘယ်နေရာရောက်သူ့နိုင်ငံသားကို တန်ဖိုးထားပါတယ်ခင်ဗျ...။